War degdeg: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka oo lagu Kala baxay | Kalshaale
War degdeg: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka oo lagu Kala baxay
Jan 11, 2017 - 71 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Waxaa goordhaw soo dhamaatay tirinta codadka Xildhibaanada Baarlamaanka ee maanta dooranaya Gudoomiyaha Baralamaanka Federaalka Soomaaliya ay ku tartamayeen ilaa Afar Musharax.
4-Idiris Aadan Dhakhtar 2-cod.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (71)
Jug jug meeshada joog weeye weli waxaa socda saami qaysigii qabiilka. Yacni hawiye iyo daarood ma ogola in beelaha kale ee somaliyeed ay xukunka dalka qabtaan….raxanwayn. ilaa lixdankii gudomiye barlaman
Bal dadow arka dullinimadda meesha taal, suuq madow iyo been run laga dhigay
jawaari aya hogaanka haya guul ayan u rajaynYa parafasor jawaari wa masuul ka bixikara xilka wayn oo daacad ah
Horey baanu u saadaalinay in Jawaari ku guulaysanayo.
Waanu ka xunahay in Jawaari soo noqdo, laakeen wax dhaamma meesha ma joogaan.
Guul ayaan leenahey Guddoomiye Jawaari
Muluq muluq iyo lugooyo waxaa noogu filan Wasiirada, haddii lagu daro Golaha Sharcidajinta soo maahan Lug ha qaadin.
Hore ayaan u saadaaliyay inuu Jawaari iman doono.Xidig haduu haysanlahaa xataa xikdhibaanada Daarood oo dhan marna kuma guulaysteen hanashada jagadan.Dadka meesha maraya Daaroodku 1/5 ayay ka yihiin.Sheekada ugu wayn waxaa ciyaaray Xasan sheekh,oo isku duba riday codka uu ku soo baxay Jawaari.taasi ooo uu ka baqayay Shariif sakiin.Haduu Xasan sheekh wadanlahaa xidig – xidig ayaa soo bixilahaa.Daaroodka meesha marayaa ama dadka meesha maraya waa laga iibsaday codkooda.
Maya, waa kaa qaldan tahay sheekada meesha ka dhacday.
Xassan Sheekh iyo dhamaan xulafada DAAROOD, waxeey taageersanaayeen in uu soo baxo JAWAARI.
Waayo, hadii uu soo baxo CABDIRASHIID XIDI, Xildhabaanada DAAROOD waxeey ugu shubbi lahaayeen SHARIIF SAKIIN se uu noqdo madaxweyni.
CABDIRASHIID codadka oo helay waxaa weeyee, DIGLO MIRIFLE, iyo xoogaa HAWIYE ah. Nin Daarood ah cod ma siin XIDIG. Xildhibaanada DAAROOD iyo Maamulada DAAROOD horey beey ugu sheegin XIDIG in uusan isa soo sharaxin. Haddi uu isa soo sharaxna guulaysan maayo.
Hadda iyo dan, SHARIIF SAKEEN, musharaxnimadiisa Jagada Madaxweynaha waxeey gashay ciin.
Ogsoonow, SHARIIF SAKEEN musharax uu ugu shubbo baa madaxweyni noqonayaa. Waayo, wuxuu wataa ilaa 60 xildhibaan oo iskuu duuban.
Hadda Siyaasadda SHARIIF SAKEEN iyo XASAN GARGUURTE waa kaaf iyo kala dheeri.
Sua’asho waxaa weeyee, yaa lacag haaysta?? Yaa SHARIIF SAKEEN taageeraya??
Kubbado hadda waxeeey dhex taal: GARGUURTE, SHEEKH SHARIIF iyo CUMAR CABDIRASHIID.
Ogsoonow, CUMAR CABDIRASHEED IYO SHEEKH SHARIIF waxaa ka dhaxeeya gaanshaabuurse weyn oo ay soo maleegtay UAE.
HA LA SUGGO CAYAARTA SIYAASADDA.
Asc asxaabta kalshaale waan idin salamay
Waa lagaa qaaday salaanta ee soo dhowow, xageese naga soo salaantay?
Ku soo dhawoow Barxadda Kalshaale, Talo hor dhac ah, tartiib tartiib u baro figradaha dadka, iska ilaali jalfisada Axmaarada AfSoomaaliga bartey.
3 bari oo soo dhaweyn ah ayaad heysataa, kaligiis talis ma jecli anigu.
Haddiiba dalki iyo dadkiba kuwi dayacay ay soonoqdeen xaaladu waa si kale ilahay xaqa hafahamsiiyo kuwan madax kusheega ah ee dadka iyo dalkaba dayacay kuligood waa ismadhaanto iyo dhashood intay xilka hayan wax dalka iyo dadkaba ufiican mayna qaban maxay soomaali badan badan oohin iyo darxumo kunoolaayeen intay dalxiiska kujireen axay ax waxaa kushaqaysanahaya cadawga soomaaliyed ilahayow dalkan iyo dadkan adaa badbaadin karee naga qabo xasidka noo heshiiyay aamiin
waar ma khmriyacabkii baa soo laabtey.
bal kani muxuu faaiideynayaa???.
Adiga wax la yidhaa Daarood ayaa ku hor ordaya.Waabad ka dhalatay maba diidi kartid e sideeda u hayso dadkana ha ku wareerin Daarood wax aanay wakhti u haynin maqalkiisa.
Teeda kale,Sharif Sakiin Madaxwayne ma helayo cida uu taageeranaa ma helayso.Sakiin Raxan waynto ma jecla intooda badan, e Jawaari ayay raacsanyihiin.
Anyway,waxani waa lacag iyo dano gaar ahaaneed.Shariif Sakiin hadii uu karayo xidig ayuu soo saarilahaa.
Madaxwaynaha soo socdaana waa Xasan sheekh,ina cabdi rashiid waxan meesha yaacaya waxba ma qaadi karaan.Emaaratka ayaa i wata iyo nacasnimo ayuu meesha la ordayaa oo xataa aanu qarnaynba.Waar waxaa meesha yaacaya hadii ay rabaan inay yimaadaan xasan hayska joogo meeshiisa.Eegi doonee.
Masuul dabshid mahadsanid iguma ogid inaan golaha la imaado wax dhiba qof walalkay ah mar kale mahadsanid waan dhawahay
Sidaas haddi aad u hadasho waxaad isku dhacaysaan ninkaan kuu digaayey ee DABSHID.
DABSHID waa nin qabiil dilay. XASAN GARGUURTE iyo XULAFADIISA wuxuu ku taageerayaa oo kaliya qabiil.
Halka anigo aan qabo, XASAN GARGUURTE iyo xulafadiisa DAMJADIID, ay yiheen yeey wax kasta leefta oo aan waxba ka reebin, iska daa wax yadh ay qabteeni.
Marka, anna waa kuu digayaa ee bal is-ilaali inta aad cusub tahay.
kaligi taliye w c s sodhawow talikistalisnimo ma fcna kkkkk
Barawani king qof walba fikirkiisa waa uxor
barawani meeshan xasan sheikh wax ka tunweyn ma jogan cumar abdirashiid cidna dooran mayso shariif sakiin jawaari aya hada ka xildhibaano badanayo wayo adaga hada madax ah haday lacag noqotana shariif sakiin wa laga lacag badan yahay lol an ku duceeysano inu alle mid kheyr qabo oo soomaali guul u hor seeda inu alle no sahlo midu noqdaba xita xasan sheikh
Muna walal qaali waan dhawahay mahadsanid kali talinimadana ma aha midi qlafka ahayd ee ahayd saan rabo samee waa mid habaysan oo qof walba dan u ah mahadsanid
farxiyo astaqfurah dheh adiga miya marqaati ka ah inu qabri cabo bal ka jwb
DAAROOD haduusan meesha joogin waxba inoo socon maayaan.
DAAROOD waa xiddiga SOOMAALIYA. La’aantiis, SOOMALI jiri meeyso, jecloow ama ha jeclaan.
Midda kale, ani waxaan taageersanahay ninkii kale ee soo baxayaa aan ka ahayn GARGUURTE. GARGUURTE waa la arkay wax qabadkiisa. Waxuu dhaco mooyee, waxba ma qaban.
Waxuu qabtay waxaan ka xasuusta:
++ GAALLO BAKHTIDAY SUJUUGEEDA
++ DEKADDA BERBERA OO LOO SAXIIXAY UAE.
++ GURYO IYO RESORT LAGA IIBSADO TURKEY
++ LABADIISA XAAS OO GURYO DHISOOW ISUGU FAANAY, ANAA KAA GURYO BADAN, IYO ISO SOO TIDHI.
++ BANKIGA DHEXE OO DHABARKIISA DAMBI LA JABSADO OO LACAGTA LA GALA BAXO.
GARGUURTE wax uu ku fiican yahay ma jirto. Qofkii taageersan GARGUURTE, waa nin nimcaanta PUNTLAND ugu taageersan sida MR. BAHAL.
kaligis taliye wa ok hada dhanka wangsan u dhigtay lakin qoraalkiisabo i dhibayo majirto kaftan.com
wayo ana ina taliya jeclahay kkkk
barawani daarood mesha wa loga badan yahay diid ama yeel kkkkkkkkkk
barawani adiga daarood hadii allw ka dhaliyay maxa barawani u sheegata car manta ku dhaaro inu abaha barawani yahay car car
Su’aashii aad shalay na so aashay, waa tanaa jawaabteedii, ee akhriso.
Hayee, intaas waa qayb yadh ee ciidamda PUNTLAND.
Ha ila yaabin, ani DAAROOD mooyee dad kale ma aqaani. Reer Baraawe ma aqaani, inkastoo aan ka dagaalamay dagaaladii sokeeyee ee SOOMAALI WEYN.
Sax, waan ahay reer BARAAWE. Waliba fiinta sare ee reer BARAAWE.
Hase yeeshe, isku dhaqan ma nihin. Walaalaheey hadh iyo habeen waa ila soo xidhiidhaan oo yiraahdaan, war bal kaalay afka CHIMNEY ku barneee.
Laakeen, ii cutumi meeyso. Waxba ha i dhaarin, hadii aad DAAROOD igu sheegto waan qaadanayaa. Waana ahay DAAROOD.
taageerada ciyaarta ka daa.Qabiil ayaad wax ku taageertaa waxna ku diidaa.Taasi taageero lama yidhaa e waxa la yidhaa Tol waa tolane.Saladaa qabiilka ayaad ku jirtaa.
Taageero waa marka aad masgaxdaada isticmaalayso ee aad aragtiyaha kala duwan aad mid raacayso.Markaa Xasan sheekhna shacab ayuu haystaa sida aadba shacab u haysato.Teeda kale.maxaad dadka Daarood sanka uga galgalinaysaa,ma cidbay lacag siiyaan?
Somalidaa xayraanka ee haraadan ayay ka midyihiin.Waar ninyohow Reerka magaca ayaad ka disheen adiga iyo qaar meeshan soo galaa.
barawani towxiidka maxa sawirka soom lagu so dhahay ma gaalada aya shilimaad loga raadsanaya cajiib wa yaab iyo ama kaag
taasi waxay i cadetnaysa inad ku qaraabatid qabiilka masakiinta re barawaani duli
Muna waxan kuqoslay anaa jecel inaan taliyo taada kuguma haysto
Waryaa MR. BAHAL hadii runta laga hadlo xanaaq lee dhix isla siinaysaa.
SHEEKH SHARIIF yaa waayee? Ma DAAROOD baa?
Midda kale, DAAROOD waxbeey qabtaan. Car arrag nin Madaxa oo kale oo wax qabanayaa.
Bal eeg, kan idiin ah Madaxweyni, ee SIILAANYO, wali wuxuu dhex fadhiyaa oo uu ku xaadhaa suuligii uu isticmaali jidhay GEN. MOORGAN, before 28 years.
Kuwa, GALMUDUG iyo HIIRSHABEELE, iyago ama ha xadeen ama ha hayeeni, waxba ma qaban karaan. Waayo waxba gacanta uguma jidhaan.
SHARIIF SAKIIN, awalba tuug buu ahaa. Maamulkii SOUTHWEST waa xaalufiyey, wax uu qabto iska daa.
JUBBALAND oo shala dhalatay horumarkeedo wuxuu ka horeeyaa PUNTLAND.
Bal eeg, SOOMAALIDII QAXOOTIGA. Halka dhalinyaradii IIDOOR ay ku mashquushay qaad la ruugo iyo geerasheen. Halka dhalinyarada HAWIYE ay ku mashquuleen tuuganimo, kufsi iyo biliqo oo ay la tegeen waddamadii QAXOOTIGA.
Hase yeeshee, dhalinyaradii DAAROOD waxeey la tageen wadammadii loo qaxay: Tacliin, sharaf, ganacsi iyo siyaasad weyn oo cayaareen.
MR. BAHAL, please share with me this Article, oo jaraaidka waaweyn ee CANADA IYO USA ay ka qoreen dhalinyarada DAAROOD ISMAACIIL, oo lagu magac daray:
LIIBAANTII DAAROODKA AY LA YIMAADEEN USA IYO CANADA:
Xaasidnimado ma fiican ee bogaadiya walaaliheena SOOMAALIYEED.
Ku lahaa duli.
Walaahi diyaar lee u ahay in aad toos ii aragto, se aad u ogaato meesha aad ka soo jeedo.
Asxaabeey wixi aan kuwaynay soomaalinimo kuma helayno qabiil mar walba xaqa aan uhiilino waxa dalkeena iyo dadkeena sidan ugalay waa qabiilka aan u isticmaalayno sida xun waxaan nahay ul iyo diirkeed makala maarano cuqdada aan iskasaarno
Xidig waa dhacay
Adeer sayidka wuu kuu sheegay
In aadan noqonaynin
Gudoomiye waad madax adaygtay
Maanta ka maal.axmed madoobana waad
Colaysatay DAAROODNA waad colaysatay
Maanta meeshaad doonto aad.
Guuuul iyo gobanimo.
kkkkkkkkkkk Ilaa imiga waxaad amaanaysaa Daarood.Waxa kale oo dhana waaba Eber.Fiiri,Daarood haduu fiicnaan lahaa Somaliya ayaa fiicnaan lahayd.Isma qaban karayaan sawirka ka muuqda Somaliya iyo hadalkaagu.
Waxaad tidhin Daarood ayaa ugu badan Somaliya.Yes. Kaba soo qaad.Wax faaiido ah ii sheeg.
ma arkeyn isagoo cabaya,laakiin waan maqley.
waar odayaasha cadaadey ee harbashyada ah ma LA caydhiyo.
oo dhalinyaro maskax fiyow LA keeno.
Dhalinyaradu intey Habeenkii boodan ayey taladana ka boodi, odayaashaan xabad kalyaalaha ah ma deg degaan.
Miyaadan arkin Parliament Mareykanka waxaa wada fadhiyo odayaal lagu heysto 1950 ayuu madax ahaa oo Nin Madow Salaami waayey.
Jawaari wuxuu ku jiraa 7dii nin iyo 1kii Gabar ee soo qorey sharcigaan/dastuurkaan ku meelgaarka ilaa waqti waa inuu baro dhalinyarada waxa loola jeedo Qodob hebel iyo XARAF Q.
dal dhan oo aarkuliiste dooranaya noorway magaalada tronheim ayuu deganaa gidaarada ayuu raaci jirey waa lawada yaqaaney ,isagoo ido ah ,markaa maxaad raja kasugaysaan
Saaxiibow soo akhriso taariikdha RWANDA. Markaas baad wax ogaan karta.
RWANDA sida SOOMAALIYA oo kale baa waxaa ka dhacay dagaal sokeeye.
Waxaa loo dagaalamay HUTO oo majority ah, iyo TUTSI oo minority ah.
Markii hore waxaa la xasuuqay TUTSI. Hase yeeshee, TUTSI waa is-habeeyeen. President Musevini oo hooyadiis ka soo jeedo TUUTSI waa taageeray TUTSIGI oo qaxooti ku ahaan jidhay.
Waad la socota President PAUL KIGAME wuxuu ka tirsanaa ciidamadii la qabtay UGANDHA MR. MUSEVINI.
Markii la soo hubeeyey TUUTSIGII, waxee se sahlan waddanka ula wareegeen.
Taas waxaa xusud mudan, markii laga adkaaday HUTUIHII waxeey qaateen nabad.
Marka, HAWIYE waa tee uu dagaalmay. Dadkii masaakiinta ahayd waa tee MUQDISHU ku xasuuqeen.
Halkii HAWIYE hanan lahaa xukuumad wanaagsan sida PAUL KAGAME, HAWIYE waxeey bilaabeen xasuuq, kufse, iyo dilal.
Taase waxeey ahayd fursad weyn oo 40 ku xukumi lahaayeen SOOMALI WEYN ay lumiyeen.
Maantay, HAWIYE waxba kama aha. Siyaasadee COL. CABDULLAHI YUUSUF baa hirgashay. Wadankii Federaal baa laga dhigay. HAWIYE muqdishu ha isku cunno ama ha badbaadiyo, wax SOOMALI WEYN u taal ma aha.
Nin waliba ratigiisa iyo caqligiisa, iyo maskaxdiisa lee kaashanayaa.
SOOMALI WEYN in ay maciinsato KENYA iyo ETHIOPIA waxaa sabab u ah walaalaheena HAWIYE.
Jawaari waa Oaday Reer Magaale ah.Waagii Saacid iyo casilaadiisii ayaan daawaday isaga oo meesha Parliamentka ku dhex wareeray.
“Yaakhiin,fadhiista,no”.Maxay waaaye,joojiya buuqano..
Meeshaba wuuu iskaga baxaykkkkkkkkkkkkkk
Ani ma arag JAWAARI oo khamri cabaya. Laakeen, DAHIR CALASOW baa barta soo dhigay JAWAARI oo Hoteel ku yaal NORWAY, hadba derbi qabsanayaa, oo tallaabadii ka dhuntay.
DAAHIR CALASOW wuxuu noo sheegay in uu cabsan yahay, xaarkii iyo kaadidi isku daray.
Taasi isaga ayay taalaaye,dad Somaliyeed miyuu wax dambi ah ka galay?
Wixii shaqsiyan ah xaq looguma laha in lagu caayo.Ilaahay ayaa qofka siiyay aqliga uu ku socdo.Arimaha shaqadiiisa waad ka hadlikartaan.
SOMALIYEY WAXBA HA U HANQAL TAAGINA TUUGTAAS,DHAMAANTOOD WAXAA MADAXA KA HAYSTA MICHEAL KAETING WAA KAAS KA AY DIIRADAYDU HAYSO,,,WAA GUUMAYSTE DEVID CAMAROON SOO DIRSADAY OO U ILAALINAYA DANAHA SHIRKDA “”SOMA OIL AND GAS””..ALL MOVE..DOWN
Saeed Yusuf mahmoud says:
Hhhhh darood qalbi adakaa oo
Kursijecela ma xuunsha
Show somalida ogaadenkaa ugudoqonsan shalaybu
Basaas iyo jaasuus
Ka ahaa somalia maantana waad aragtaa
Waxuu doonayaa inuu
Meeshi uu sharcigu
Kabacdina soundkii iyo
danbiga le ka dhameynysiin idinka iyo daahir calasow waxa is dhaantaan malaha daahir wa wadani lakin dadka ayu aflagadeeya taasa ku nacay
Haddi talada loo dhiibi lahaa dhalinyarada dalka iyo dadkaba wax muuqda ayay uqaban lahaayen lkn inta kuwa cadawgu kushaqaysto aan kukala taageerayno qabiil ahaaan uma malaynayo inaan kabaxayno sidan rabbi talo kufilan soomaaliya waxay noqotay meel aan lakala lahayn qolaba meel haka ruugto tolow maxaa noo hadhi doona cajab
Jawari waan uhambalyeynaya wana ku khasabanhy,Balse 4 sano elasoo dhafay waxba maqaban e 4 sano haka fa,ideysto o xilka loodortay hakasoo baxo ishallah .
barawani abduagi yusuf ayabo dhibka manta ku jirno no keenay amxaaro ayu dalkeba ku so hogaamiyay ila manrana ayaga qasaya hadii malinti abdulahi yusuf ka dooranayay la dooran laha nin an dalka danbi ka galin tan manta na haysata nama haysan lskin dowlad xoog leh oo dowkada dariska iska celisa ayan ahan laheyn alshababna majiren oo itopita aya nagu dhex sameysay lakin shalayto wa shay xaaran ah ma shalaynayo
Markii LA dooranayey
Libiska uu watey
Reer magaal gaboobey
Tikid ayey jaran laheyd
Iney soo aroosto
a igana waxaan ku iri
Mr dalxa aroos hadiiba
Digir mirifle isagaa
w c s bishaaro sodhawow ma gabar rer putland aya tahay mise barawani ay dhalen aya tahay sida barawaniga naka jooga kkkkkkk kaftan.com
Dhaman waan idin salamy.Odeygaan 80 jirka ah waa khasaaro wana khamriyo cab horeyna waxba uma qaban hadana yaanlaga sugin kknkkkkkkkkkkkkk Rer puntland hadanu nahay kab ayanu afka kala dhaceynaaa kkkkkkklkIdoorka maxaa loo hagradaa o xil loogu dhiibi wayey awey darood iyo hawiye knnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkn
Sxb wanku salamy adigu jawari waad tagersan tahay inuusoo laabtay xasana sidoo kale kkkkkkkkkkkkkkCcc inuusoo laabto mataagersan tahay ?kkknkknnknnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
xaliimo kkkkk dalxa wa jarerweyn ma aha digil yio mirifle kkkkkkkkk mise rer konfurgalbeed aya ka galsysa sxbt
Waan dhahay walahay aniag rer puntland inan ahey wey cadahay reekan doono aan ahadeehhhhhhh Adigu ma rer xamar ayaad tahay ?
mustafe xasan sheikh tageero goni ah uma ahi ninkasto so baxo wan tageeraya xasan sheikh wax dhamo mabo u jeedo koo ka fican hadi la heko wan so dhawayn hadu cumar abdirashid so laabtana wan tageeraya maxa dhacay oo ku diidaya
bishaaro xamar wa magaaladaydii lakin dariskaga an ahay noh kkkkkk
mustafe dacad salamulah sxb
Ka warran xaafadii yadheey ee CADAADO. CABDIKAREEM oo ka degay CADAADO isaga oo wato gafuur-culus.
REER XAAJI SULEEMAAN caamo iyo caruurba iyo dumarbaa oo dhagxaan kala hortagay oo ku yidhi, halkaan CADAADO waayee, ee naga tag oo aad BARAXLEEEY.
Hadda magaaladii weey kacsan tahay.
ALLOOW SAHAL AMUURAHA
Tu reer nimcaale ah
Oo reer kismaayood ah
ay ugu dhegtey jawaari
Waà reer magaal kkkkk
Waa Ku salaamey
++ Maxaan ku doonay oo kugu daalay
++ gacaliso soo dhowow, oo dhaxanta meel iga geey
++ qalbiga ku jantoo oo aan lagaa go’ain karin.
++ Ku doon doonay oo kugu daalay, ee xagee kaa helaaa
barawani dhimaleh inta xilka uga harsan madaxtootada gaalkacyo ayu ku shaqaynaya haday rer cadaado diidan inu jogo cadaado kor iyo hoos wa madaxwaynahooda sharciga
Hala soo dhaweeyo @ Bishaaro Puntlander waxey iila muuqataa qof Aqliga iyo siyaasadda ka hano qaadey, waxaan dhihikaraa waa qofkii labaad oo reer Puntlander ah oo sida Soomaalida u kaftamo sida @ Jabhad.
Kuwa kale waa Dhoocilo ama boojaalo
Waan dhawahay o rer kalshale wey iso dhaweyen adna thanks.
Balse wanka diday puntlanderka halkan waxka qora waa dhocilo labo shakhsi maheehhhhhhh
Hadaan asxabta qiimyey dadka qabiil ka hadla ayadka midtahay hhhhhhhhhhhh
Ku fahmay walashay e barasho wanagsan balse xamar waa magaladenii dheh noo magaaladadii sxb hhhhhh
Dadki soomaaliyeedna abaar xun ayay kujiraan kuwi kudhaartay inay wax uqabanayaana warba uma hayaan oo waxay kujiraan daamaashaad yaa rabbi soomaalida qaarkeed fahamsii xaqqa aamiin
Sheekada waa jugjug meeshaada joog.
Gurguurte isna ha lasoo celiyo.
Ilaahay xukun xun ma abuurin ee ummad xun ayuu abuuray.
Ummad walbana xukunka astaahisho ayuu Ilaahay siiyaa.
Hambalyo, Congratulation, ayaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka 10aad ee dowlada dhexe ee Somaliya, Professor Jawaari.
Waa ninkii ugu aqoonta iyo wadaniyada, iyo shaqa adeega badnaa inta xilkaan kula tartameeysay.
Gudoomiya Jawaari waa “statesman” oday wadankiisa Somaliya jecel, oo raba in uu Somaliya godka eey kujirto kasoo saaro. Vision kaas oo uu lawadaago Madaxweeyne Hassan Shiiq, waxeey ka dhigtay in labadaan hogaamiyaba aanan laga jecleeysan Garoowe, sababtoo ah, halkaas Garoowe waxaa hogaaminaya dad sida daanyeer qabqable Faroole aaminsan juffo, iyo qabyaalad, isku meelna qof galin karra majirro qabyaalad/qabiil, iyo maslaxadda caamka ah ee Somalida oo dhan.
Waxaan rajeeyn in sida eey xildhibaanda u fahmeen in aan loo baahneeyn in labadallo hogaankga golaha sharci dajinta, sidaas oo kale aanan loo baahneeyn in labadallo Madaxweeyne Hassan Shiiq, si gaabisba ha’ahaatee horay loogu socda.
Somalidu waa in eey fahamtaa in eey iska daayaan 4 sanno kasta oo eey nin cusub dooranayaan, kadib 4 sannana eey caaynayaan kii eey doorteen.
Mushkilada dadka iyo dalka Somaliya heeysata maahan mid 4 sanno, iyo 8 sanno lagu soo gabagabeeyn karra, laakiin, ugu yaraan jidka toosan ayeey saari karaan Madaxweeyne Hassan Shiiq iyo gudoomiyaha golaha sharciga Professor Jawaari.
Aabboow sidii miro BARDAA lay bashuuqsadaye . Miyuu ahaa
” Qofkuu calafkii adeegaa , waxuu cunilahaa ma waayo “